अस्पताल लैजाँदै गर्दा बेहोस भएका विजय शाहीको मृत्युको खबर कसरि भयो भाइरल ? – Kavrepati
Home / समाचार / अस्पताल लैजाँदै गर्दा बेहोस भएका विजय शाहीको मृत्युको खबर कसरि भयो भाइरल ?
admin July 28, 2021	समाचार Leaveacomment 163 Views
काठमाडौं । विलक्षण स्मरणशक्तिको दावी गरेर चर्चामा आएका विजय शाहीको मृत्यु भएको भनेर सामाजिक सञ्जालमा फैलिएको हल्ला असत्य प्रमाणित भएको छ । प्रहरीले शाहीलाई कालिकोटस्थित उनकै घरमा फेला पारेको छ ।
कालिकोट जिल्ला प्रहरी कार्यालयका डिएसपी चक्रबहादुर शाहले विजय शाहीको मृत्युको हल्ला झुटो भएको बताए । सामान्य विरामी भएर अस्पताल गएका शाही आफ्नो महावै गाउँपालिका वडा नं. ५ स्थित घरमा आइसकेकाे उनले जानकारी दिए । ‘मैले विजय शाहीको गाउँमा प्रहरीलाई बुझ्न पठाएको थिएँ । उनीहरुले शाहीलाई घरमै भेटेको बताएका छन् । मृत्युको हल्ला झूटो रहेछ,’ डिएसपी शाहले भने ।
विजय शाहीका शिक्षक दिपकबहादुर शाहीले सुरुमा फोटो सहितको खबर फेसबुकमा हालेका थिए । अस्पताल लैजाँदा लैजाँदै विजयको निधन भएको उनले उल्लेख गरेका थिए । त्यही पोष्टका आधारमा धेरैले विजय शाहीलाई श्रद्धान्जली दिन भ्याए । तर शाहीले आफ्नो पोष्ट फेसबुकबाट हटाइसकेका छन् । विजय शाही भने सामान्य अस्वस्थ मात्रै भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
प्रहरीका अनुसार शाही मंगलबार दिउँसो विरामी भएर बे’होस भएका थिए । उनको उपचारका लागि परिवारले अस्पताल लैजाँदै गर्दा बाटोमा होस खुलेको थियो । त्यसपछि परिवारका सदस्यले उनलाई बाटोबाटै घर फर्काएका थिए । अहिले उनी आफ्नो घरमा नै आराम गरिरहेका डिएसपी शाहीले बताएका छन् । पत्रकार न्यौपानेले पनि शाही जीवितै रहेकाले अफवाह नफैल्याउन आग्रह गरेका छन् ।
शाही निकट व्यक्तिहरुले नै मृत्यु भएको भन्दै सामग्री पोष्ट गर्नुको कारणबारे पनि प्रहरीले खोजी थालेको छ । आफूलाई चर्चामा ल्याउन उनले ‘मेमोरी किङ’ भएको दाबी गर्ने गरेका थिए । तर उनी झुठो भएको सार्वजनिक भएसँगै शाही काठमाडौंबाट भागेका थिए । उनीमाथि ठगीको आरोप लागे पनि प्रहरीमा औपचारिक उजुरी परिसकेको छैन ।
सामाजिक सञ्जालमा भाईरल गरिएको शाहीको तस्बिर
Previous किन दसैँमा कहिल्यै ससुराली जाँदैनन् राजेश हमाल, यस्तो छ कारण
Next एमाले फुट्न कति चाहिन्छ संख्या ?